अबको रोडम्याप : प्रधानमन्त्री के.पी. , अध्यक्ष प्रचण्ड र राष्ट्रिय सभामा हिमानी -::DainikPatra
अबको रोडम्याप : प्रधानमन्त्री के.पी. , अध्यक्ष प्रचण्ड र राष्ट्रिय सभामा हिमानी
नेपाल राष्ट्रको निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका पृथ्वीनारायण शाह कालदेखि शाहवंशीय विराशत र त्यसप्रति आस्था राख्ने समुदायको भावनाको पनि कुनै न कुनै रुपमा कदर हुनु आवश्यक देखिन्छ । त्यसका लागि यसपटक नै भद्रमहिलाको रुपमा सुपरिचित हिमानी शाहलाई राष्ट्रिय सभामा लैजानु पर्छ । यसले गर्दा नयाँ संविधान अनुसार पनि शाह परिवारलाई स्पेश दिइयो र दिइएको छ भन्ने सन्देश प्रवाहित हुँदा देशभित्र र बाहिर समेत सकारात्मक सन्देश जान्छ ।यदि पूर्व राजाले नयाँ संविधानलाई शिरोपर गरी मुलुकको शान्ति र समृद्धिको मार्गमा योगदान दिन चाहन्छन् र त्यो विश्वास दिलाउँछन् भने पूर्वराजालाई नागरिकको हैसियतबाट पाँच वर्षको लागि राष्ट्रपतिको रुपमा स्वीकार गर्दा आखिर के नै फरक पर्छ र ? यसले द्वन्द्व न्यूनीकरण्मा सहयोग पुग्छ । यस विषयमा पनि बिनापूर्वाग्रह, बहस र छलफल चलाउनु आवश्यक ठान्छु म ।
मैले मुलुकको समसामयिक परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी २९ जनवरी २०१८ मा फेसबुकमार्फत संक्षिप्त टिप्पणी सम्प्रेषित गरेको थिएँ । त्यसमा मैले लेखेको थिएँ – ‘अब हामीले विगतमा राजनीतिक आन्दोलनमा दिएको योगदानको चर्चा गर्ने र त्यसको व्यक्तिगत मूल्य खोज्ने समय गयो । एमाले भनेको राष्ट्रका सबै नागरिकको साझा पार्टी हो । जबजको सफल प्रयोगले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आधारित नयाँ संविधान बनेको छ । त्यसको आधारमा स्थानीय प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनाव सम्पन्न भई राष्ट्रियसभा चुनाव पनि सम्पन्न हुने क्रममा छ । जबजकै सफल प्रयोगका रुपमा मुलुक अगाडि बढिरहेको परिवेशमा सबै व्यक्ति र शक्तिहरुलाई एमालेमा समाहित गर्ने नीति अनुरुप नै चर्चित गायिका कोमल वलीलाई राष्ट्रिय सभामा लगिएको हो ।
यसले एमालेमा धेरै मानिसहरु आकर्षित हुनेछन् । अब एमालेले भद्रमहिलाका रुपमा सुपरिचित हिमानी शाहलाई पनि राष्ट्रिय सभामा लैजाने र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि बाहिर राख्नु भन्दा नागरिकको हैसियतबाट एमालेको जबजको नीति अनुसार चल्ने शर्तमा राष्ट्रपति बनाएमा द्वन्द्वको न्यूनीकरण पनि हुने, केही रुपमा भए पनि राष्ट्रको ढुकुटीमा पनि बच्ने हुँदा यसतर्फ नेतृत्वको ध्यान पुग्नु आवश्यक देखिन्छ । एमालेको कार्यकर्ता पंक्ति विशाल हृदय भएको विवेकशील र बुद्धिमान छ । त्यसैले त एमाले बलियो बन्दै गएको छ । यसको पहल पनि हाम्रो प्रदेश नं. ५ बाटै होओस् भन्ने हाम्रो कामना छ ।’
यो टिप्पणी फेसबुकमार्फत सार्वजनिक भएपछि धेरै महानुभावहरुबाट प्रतिक्रियाहरु प्राप्त भएका छन् । सबै प्रतिक्रियाहरु मेरो विश्लेषण समय सान्दर्भिक र सटिक भएको टिप्पणीका साथ प्राप्त भएका छन् । जुन टिप्पणीहरु फेसबुकमा इच्छुक व्यक्तिहरुले हेर्न पनि सक्नु हुन्छ । त्यसमध्येका केही प्रतिनिधिमूलक टिप्पणी यस्ता छन् । अर्थ विश्लेषक वैकुण्ठ पाण्डेले – ‘धेरै राम्रो विचार सरको’ भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । त्यस्तै अग्रज पत्रकार वसन्तध्वज जोशीले ‘शतप्रतिशत सहमत छु म बालकृष्णजीको गहन विचारप्रति… । बरु शुभस्य शिघ्रम गर्दा बेस होला कि । राजा पनि एक शक्ति केन्द्र नै हुन्… । बदिलिएको नेपालको राजनीतिक परिवेशमा शक्ति सन्तुलनका लागि बालकृष्ण जीको विचारोत्तेजक यो लेख निकै समसामयिक र सान्दर्भिक लाग्यो … । धन्यवाद छ बालकृष्ण जी ,।’
त्यसैगरी शशि पौडेलले ‘उचित विश्लेषण सर’ भन्नु भएको छ । टिकाराम भट्टराईले ‘व्यङ्गय भद्रता साथ पस्किदा कति राम्रो’ भन्नु भएको छ । ऋषि आजादले ‘बहुदलीय जनवादलाई आत्मसाथ गरी नागरिक भएर आउने जो कोही पनि यसमा आउन सक्छन् । किन नसक्ने ?’ भन्नुभएको छ । त्यस्तै दीपेश अधिकारीले ‘सही विचार’ भन्नुभएको छ भने गुणाखर भट्टराईले ‘सालिन व्यङ्ग्य’ भन्नु भएको छ । त्यसैगरी कृष्ण डीकेसीबाट ‘राष्ट्र र जनताका लागि गौरव हुने विचार, नेपालको शक्ति सन्तुलन र शान्तिप्रतिका महान विचार’ को संज्ञा दिइएको छ । मेरो त्यो विश्लेषणलाई कसैले पनि बेठीक भनेर टिप्पणी गरेको पाइएन । यसर्थमा पनि मलाई खुशी लाग्यो कि मेरो त्यो विश्लेषण समय सान्दर्भिक र सही रहेछ । जो जसले त्यसमा प्रतिक्रिया दिनुभएको छ, सबैमा आभार प्रकट गर्दछु । साथै जो जसले फेसबुकमार्फत त्यो विश्लेषण पढ्नुभएको छ । उहाँहरु सबैमा धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
मैले त्यो टिप्पणी गरिसकेपछि मुलुकमा प्रदेशसभाका प्रथम बैठकहरु सम्पन्न भएका छन् । नेपालको नयाँ संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार राष्ट्रिय सभाको चुनाव पनि माघ २४ गते सम्पन्न भई त्यसको परिणाम पनि आइसकेको छ । चुनावी परिणाम अनुसार नेकपा एमालेको तर्फबाट राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा चर्चित गायिका कोमल वलि पनि निर्वाचित हुनु भएको छ । यस अवसरमा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित सबैमा हार्दिक बधाई दिन्छु । साथै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आधारित नयाँ संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार स्थानीय, प्रदेश, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधिहरुलाई हार्दिक बधाई दिंदै सफल कार्यकालको लागि शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
यसर्थ पनि म विशेष बधाई दिन चाहन्छु कि यो नेपालको राजनीतिक इतिहासमा युगान्तकारी निर्वाचन थियो, त्यो सफल भएको छ । यसर्थ पनि म विशेष शुभकामना दिन चाहन्छु कि नेपालको युगान्तकारी परिवर्तन पछिको पहिलो जनप्रतिनिधि हुने सुअवसर प्राप्त गर्नुभएको छ । यो अवसरलाई राम्रोसँग सदुपयोग गर्नुहोस, जनप्रतिनिधिका लागि यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण अवसर हो भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ । मैले आफूलाई संघीय गणतन्त्र नेपालको नागरिक हुन पाएकोमा गौरवान्वित ठानेको छु । नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताले पनि त्यो गौरवको अनुभूति गरेका छन् । भविष्यको मनमनै खाका कोर्दै अब जनप्रतिनिधिले कस्तो काम गर्ने हुन् भनेर प्रश्न र जिज्ञासा पनि राखिरहेका छन् ।
त्यसैले यो समय नेपालका लागि बिहानको झुल्के घाम लाग्दै गरेको अवस्थाको रुपमा रहेको छ । उज्यालो र सुन्दर भविष्यको कामना गरिरहेको अवस्था छ । कही कतैबाट आकाशमा बादल र तुवाँलो नलागोस्, अनिष्ट निम्त्याउने आँधी बेहेरी नआओस् भन्ने जनताको चाहना छ ।
जनताले त जहिले पनि राम्रो चाहेका हुन्छन्, तर जनताले चाहे अनुसार सत्ता सञ्चालन हुन्छ–हुँदैन भन्ने प्रश्न मुख्य हो । यस पटकको चुनावमा नेपाली जनताले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता, शान्ति र समृद्धिका लागि भनी वाम गठबन्धनलाई बलियो शक्तिका रुपमा स्थापित गरेका छन् । अब सरकार बन्ने क्रममा छ । कसरी सरकार निर्माण हुन्छ भन्ने प्रश्नले जनतामा कौतूहलता रहेको छ । अझै अन्यौलको स्थिति पनि हटिसकेको छैन । तर पनि यो अन्यौल धेरै समय बाँकी नरहला भन्ने पनि अवस्था छ ।
आम जनताको एउटै चाहना छ । मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता होस्, शान्ति होओस, समृद्धि र विकास होस् । अब राजनीतिक अधिकार र भागवण्डाको खिचलोबाट मुलुकले फेरि अर्को द्वन्द्व र हिंसा व्योहोर्न नपरोस् । जनताको त्यो चाहना हुँदा–हुँदै पनि अझै यो मुलुकमा राजनीतिक द्वन्द्व र हिंसाको समूल अन्त्य भयो भन्न सकिने अवस्था अझै पनि बनिसकेको छैन । यसका लागि सबै द्वन्द्वरत पक्षलाई संविधानतः समेटेर राष्ट्रिय मूलधारमा समाहित गर्न सक्नुपर्छ । यसो भएमा मुलुक चाँडो शान्ति र समृद्धिको रोडम्यापमा अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
मुलुकका सबै राजनीतिक शक्तिहरु हृदयदेखि नै कसरी राष्ट्रिय मूलधारबाट निसङ्कोच अगाडि बढ्न सक्छन् त भन्ने प्रश्न छ । त्यसमा पहिलो कुरा भनेको नेपालमा नेपाल राष्ट्रको निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका पृथ्वीनारायण शाह कालदेखि शाहवंशीय विराशत र त्यसप्रति आस्था राख्ने समुदायको भावनाको पनि कुनै न कुनै रुपमा कदर हुनु आवश्यक देखिन्छ । त्यसका लागि यसपटक नै भद्रमहिलाको रुपमा सुपरिचित हिमानी शाहलाई राष्ट्रिय सभामा लैजानु पर्छ । यसले गर्दा नयाँ संविधान अनुसार पनि शाह परिवारलाई स्पेश दिइयो र दिइएको छ भन्ने सन्देश प्रवाहित हुँदा देश भित्र र बाहिर समेत सकारात्मक सन्देश जान्छ । यसले नेपालको आन्तरिक द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्नमा सहयोग पु¥याउँछ, राष्ट्रिय एकता बलियो हुन्छ र वैदेशिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउनमा यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । यो कुरा के.पी. ओली र प्रचण्डलाई पनि राम्ररी थाहा छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।
यससँगै जोडिएर अर्को प्रश्न आउँछ कि अब नेपालमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको अवस्था र उनका गतिविधिलाई कसरी राज्यले लिने र उनको स्थान के हुने ? त्यसो त यसबारेमा नयाँ संविधानमा जे व्यवस्था छ, त्यही अनुसार नै हुने हो । तर जब राजा नागरिकको हैसियतमा छन् र नागरिकको हैसियतले राष्ट्र र जनताको सेवा गर्न चाहन्छन् भने उनीप्रति कसैले विगतका आधारमा कुनै आग्रह र पूर्वाग्रह राखिरहन आवश्यक छैन । यदि पूर्व राजाले नयाँ संविधानलाई शिरोपर गरी मुलुकको शान्ति र समृद्धिको मार्गमा योगदान दिन चाहन्छन् र त्यो विश्वास दिलाउँछन् भने पूर्वराजालाई नागरिकको हैसियतबाट पाँच वर्षको लागि राष्ट्रपतिको रुपमा स्वीकार गर्दा आखिर के नै फरक पर्छ र ? यसले द्वन्द्व न्यूनीकरण्मा सहयोग पु¥याउँछ । यस विषयमा पनि बिनापूर्वाग्रह, बहस र छलफल चलाउनु आवश्यक ठान्छु म । अरु त्यस बाहेकका राष्ट्रिय मूल धारमा नसमेटिएका विप्लव समूह र मधेसमा केही रुपमा देखा परेका कतिपय असन्तुष्ट पक्षहरु छन्, तिनलाई पनि समेटेर अब मुलुकलाई अगाडि बढाउनु पर्छ र यसको नेतृत्व के.पी. ओली र प्रचण्डले गर्नुपर्छ । उहाँहरु दुबैले मनैदेखि यो कार्य गर्न सकिन्छ र सम्भव छ, हामी गर्छौं भनेर लाग्नुभयो भने यो पनि सम्भव छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ । यसका लागि प्रधानमन्त्रीमा के.पी.ओली र अबको एकीकृत पार्टी अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बन्नुपर्छ र बनाउनु पर्छ । उहाँहरुले मुलुकको राजनेताको हैसियतबाट देशलाई एकताबद्ध रुपमा निर्भिकताका साथ हाँक्नु पर्छ ।
यसरी मुलुकलाई एकताबद्ध रुपमा नेतृत्व प्रदान गर्दै हाँकिएमा आगामी दश वर्षमा मुलुक कायापलट हुनेछ । शान्त र समृद्ध नेपाल बन्नेछ । विश्वकै नमूना मुलुक नेपाल हुनेछ ।
यो लेख दैनिकपत्र दैनिकमा २०७४ माघ २६ गते विचार पृष्ठमा प्रकाशित छ ।